अर्का संगको एक रातले मलाई घर न घाट को, अब म कहाँ जाउँ ! ( भिडियो सहित हेर्नुहोस ) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/अर्का संगको एक रातले मलाई घर न घाट को, अब म कहाँ जाउँ ! ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
चौध वर्ष ्अघि देवकुमार (दिपेश) भुजेल र विनिता राउतको पिरती बस्दा छुट्नुपर्ने कल्पना कहिल्यै गरेनन् । ओखलढुङ्गाको रावादोलु गाउँको वनपाखामा लुकीछिपी लगाएको पिरतीको डोरी अहिले चटक्क चुँ’डिएको देख्नेहरु जो कोहीको पनि मन अमिलो हुन्छ । अन्तरजातीय जोडीले भागी विवाह गरेरसँगै जीउने म’र्ने वाचा गरेका थिए । ‘एक मुठी सास र एक थोपा र’गत रहेसम्म तिमिलाई छाड्दिन’, देवकुमारले खाएको यो कसम विनिता झल्झली सम्झन्छिन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
भर्भराउदो ३१ वर्षे उमेरमा श्रीमती विनितालाई सुत्केरी भएकै बखत छाडेपछि पहिलेका वाचा कसम सबै झुठा ठहरिए । विगतमा उनका मिठामिठा सपनाले तानेर दुई जीवनलाई एक बनाएको थियो । काठमाडौँको काँडाघारीमा बस्ने देवकुमार २१ दिने सुत्केरी श्रीमती छाडेर फागुन २० देखि अलप भएपछि विनिताका भविष्यका सुन्दर सपना च’कना’चुर बन्यो । उहाँ अहिले डेढ महिनाको सुत्केरी हुनुहुन्छ । ज्याला मजदूरी गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । बाह्र वर्षकी जेठी छोरी सुमित्रालाई आमाको स्याहार गर्न मुस्किल छ ।
आर्थिक र पारिवारिक समस्याले चार पढेकी सुमित्राको पढाइ टुटेको छ । उहाँका घरमा खानेकुरा भए त छिमेकीले पकाइदिन्थे, तर मजदूरी नहुँदा अन्नको जोहो हुन सकेको छैन । मनकारीसँग विनिता आँखा रसाउँदै याचना गर्नुहुन्छ, “सुत्केरी मात्रै उतार्न पाए त काम गरेर दुई छोरी पाल्थेँ, सहयोगीले दुई–चार महिना सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो ।”** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**